सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले पराग अग्रवाललाई नयाँ सीईओ बनाएको छ ।
सीईओ बनेलगत्तै परागको १० वर्ष पुरानो ट्वीट भाइरल बनिरहेको छ ।
उनले गोरा मानिस र मुसलमानहरूका विषयमा ट्वीट गरेका थिए ।
ट्वीट भाइरल भएपछि अमेरिकाका दक्षिणपन्थीहरू परागलाई ट्रोल गरिरहेका छन् । यस ट्वीटबाट जातिवाद झल्किने उनीहरूको भनाइ छ ।
सन् २०१० को अक्टोबर २६ मा परागले कमेडियन आसिफ मांडवीको शोका विषयमा ट्वीट गरेका थिए । उनले अमेरिकाका गोराहरूका बारेमा लेखेका थिए, ‘तपाईं मुसलमान र उग्रवादीहरूबीत फरक छुट्ट्याउन सक्नुहुन्न भने म गोरा मानिस र जातिवादीहरूबीच भेद किन गरौं ?’
पराग गोराविरोधी भएको भनी दक्षिणपन्थीहरूले घेरिरहेका छन् ।
ट्विटरले श्वेत सर्वोच्ततावादीहरूप्रति कठोर नीति अपनाउने गरेकाले उनीहरू ट्विटरको ससानो गल्ती पनि खोजिरहेका हुन्छन् । ज्याक डोर्सीका उत्तराधिकारी पराग आएपछि ट्विटरको सेन्सरशिप झनै कडा बन्ने बताइएको छ ।
आईआईटी बम्बेबाट पढाइ सकेका पराग अग्रवालले स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । सन् २०१८ मा उनी एडम मेसेन्जरको स्थानमा चीफ टेक्नोलोजी अफिसर बनाइएका थिए । उनले माइक्रोसफ्ट रिसर्च र याहूमा पनि काम गरिसकेका छन् ।
डिश मिडिया नेटवर्कले पायो यस वर्षको आईटी तर्फको एचआरएम अवार्ड
नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रमा योगदान गर्ने उत्कृष्ट संस्थालाई प्रदान गरिने एचआरएम अवार्ड मध्ये यस वर्षको आईटी/आईएसपी अवार्ड डिश मिडिया नेटवर्क लि.ले प्राप्त गरेको छ । डिश मिडिया नेटवर्क ले आफ्नो इन्टरनेट सेवा सु...
टेलिकमले आजबाट ल्यायो 'विन्टर अफर', के– के छन् विशेषता ?
नेपाल टेलिकमले आज (माघ ३ गते) देखि लागु हुने गरी विन्टर अफर २०७८ उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले पहिले उपलब्ध गराइरहेको अटम अफरलाई ग्राहकहरुको रूची अनुसार परिमार्जन गरी थप आकर्षक बनाएर विन्टर अफर उपलब्ध...
एफटीटीएच उपलब्ध नभएका सुगम स्थानहरु र अधिकांश दुर्गम स्थानहरुमा द्रुत गतिको डाटा तथा भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमले ‘४जी एलटीई’ नमस्ते वाइफाइ विस्तार गर्ने भएको छ। कम्पनीले &lsqu...
नेपाल टेलिकमले भोलि (माघ ३ गते) देखि लागु हुने गरी विन्टर अफर २०७८ उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीले पहिले उपलब्ध गराइरहेको अटम अफरलाई ग्राहकहरुको रूची अनुसार परिमार्जन गरी थप आकर्षक बनाएर विन्टर अफ...
आँखालाई हेरेरै गर्न सकिन्छ मृत्युको भविष्यवाणी !
आँखालाई हेरेर मृत्युको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ ? प्रश्न सुन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर अब यो सम्भव भएको वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ । आँखा स्क्यान गरेर आफ्नै मृत्युबारे भविष्य...
व्यावसायिक सेवा प्रदायक ‘भेटायो’ले काठमाडौं उपत्यकामा आफ्ना सेवाहरु सञ्चालन गरेको छ। कम्पनीका अनुसार यो आईओएस र एन्ड्रोइड दुवैमा उपलब्ध छ। सबै व्यावसायिक सेवाहरूको आवश्यकता सजिलै पूरा गर्न...
मेलम्ची क्षेत्रमा पाँचवटा पक्की पुल आवश्यक
एकैपटक ६ कम्पनीले पाए आईपीओ निष्कासनको अनुमति
योगेशको टिप्पणीः सरकारले कोरोनासँग आत्मसमर्पण गरिसक्यो